Madaxa Paris Saint-Germain Leonardo ayaan hubin heshiiska joogtada ah ee Moise Kean
Home Horyaalka France Madaxa Paris Saint-Germain Leonardo ayaan hubin heshiiska joogtada ah ee Moise Kean
Agaasimaha isboortiga Paris Saint-Germain Leonardo ayaa xaqiijiyay inuusan garanaynin in heshiis rasmi ah oo Moise Kean la galayo Everton la gaari doono.
Ciyaaryahankii hore ee Juventus ayaa ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho garoonka Goodison Park, laakiin wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray kooxda heysata horyaalka Faransiiska intii uu amaahda ku joogay xilli ciyaareedkan.
Kean ayaa dhaliyay 14 gool tartamada oo dhan PSG xilli ciyaareedkan – oo ay ku jiraan 10 gool oo Ligue 1 ah – in kasta oo Leonardo wali hubin haddii 20 jirkan uu baaqi kusii ahaan doono garoonka Parc des Princes.
Isaga oo la hadlaya Le 10 sport , madaxa PSG ayaa yidhi: “Maanta, in la ogaado qiimaha waa adag tahay, xulashadu way iska cadahay, waxaan dooranay inaan qaadano ciyaartoy da’ yar, waxaan qaadanay hal sano, ka dib waan arki doonaa.
“Everton ma aysan dooneynin inay isaga lumiso. Sifiican ayuu u ciyaaraa, goolal ayuu dhaliyaa. Wuxuu leeyahay mustaqbal muhiim ah, laakiin halkaas, ma ogaan karno. Ma sameyn karno wax ka duwan amaahda, waxaana u maleynayaa in maanta oo la heli karo sannad. hore u ahaa mid aad u wanaagsan.
“Haddii aan ku arki karno mustaqbalka shuruudo gaar ah, waxaan isku dayi doonaa inaan aragno sida ay wax u socdaan, laakiin maanta, waa wax aad u adag in la ogaado.”
Leonardo ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in mustaqbalka Kylian Mbappe iyo Neymar la xalin doono mustaqbalka fog.
Previous articleNatiijooyinka Kulamada Europe League, Arsenal oo guul gaartay iyo Manchester United oo bar-baro lagu qabtay
Next articleLaacibka kooxda Everton ee James Rodriguez ayaa meesha ka saaray ku laabashada Real Madrid